Bahamas na -ewu ohere Ohere ụgbọ elu na 2021 EAA AirVenture Oshkosh Show
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas na -ewu ohere Ohere ụgbọ elu na 2021 EAA AirVenture Oshkosh Show
Aviation • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
VIP Helicopter Tour - Ndị isi EAA nyere Bahamas Ministry of Tourism & Aviation Executive na -ahụ maka njem nlegharị anya nke EAA AirVenture Oshkosh, iji nweta anya nnụnụ banyere ọtụtụ puku ụgbọ elu na ndị ọbịa na -aga 'Ihe ngosi ụgbọ elu kacha mma' n'ụwa. Foto dị n'aka ekpe gaa n'aka nri bụ: Reginald Saunders, odeakwụkwọ na -adịgide adịgide na Ellison "Tommy" Thompson, osote onye isi nchịkwa. Foto site n'ikike nke BMOTA
"Ndị ọrụ sitere na Bahamas Ministry of Tourism & Aviation (BMOTA) na -agbasi mbọ ike inweta ohere azụmaahịa ọhụrụ maka ebe ha na -aga na Nnwale Nnwale Aircraft Association (EAA) AirVenture Oshkosh Show na Wisconsin," ka Ellison “Tommy” Thompson, osote onye isi ụlọ ọrụ kwuru, BMOTA.
Ndị otu Bahamas Tourism Ministry na -ezute ndị mmekọ ụlọ ọrụ ụgbọ elu na ndị mgbasa ozi.
Ọtụtụ ndị na -eleta ụlọ ntu Bahamas nwere ajụjụ n'aka ndị na -anya ụgbọ elu ndị na -aga nzukọ ọmụmụ ihe Bahamas kwa ụbọchị maka ha.
Mmemme jikọrọ ọnụ iji kwalite ma kwalite profaịlụ Bahamas n'ahịa ga -agụnye mgbasawanye na nkwukọrịta dijitalụ na ịnweta njikwa akụ.
“Na mgbakwunye na mmasị dị elu nke ndị chọrọ gaa na Bahamas n'ụlọ ntu anyị, anyị anatala ọtụtụ ajụjụ n'aka ndị ọkwọ ụgbọ elu bụ ndị gara nzukọ ọmụmụ ihe nke Flying to The Bahamas kwa ụbọchị, nke emere maka ha, na onye ana -eme atụmatụ ifega Bahamas. "
“Ụbọchị anọ n'ime ihe ngosi ụbọchị asaa ahụ, anyị esorola ndị isi ụlọ ọrụ dị ka Aircraft Owners Pilots Association (AOPA) nwee nzukọ na-arụpụta nke ọma n'otu ụbọchị, na mmemme njikọta iji kwalite ma kwalite profaịlụ Bahamas n'ọma ahịa. na ndị otu ya na-anya ụgbọ elu 400,000 iji nwekwuo ndị ọbịa bịara. Mmemme ndị a ga -agụnye atụmatụ ịre ahịa ọnụ, mgbasawanye na nkwukọrịta dijitalụ, ịnweta njikwa akụ, n'etiti ndị ọzọ, "
"Anyị enweghị ike leda mkpa ọnụnọ anyị na nyiwe dị ka Oshkosh ma ọ bụ uru nke ịrụ ọrụ ozugbo, ihu na ihu ndị isi AOPA, International Federal Partnership (IFP), EAA, ndị ọrụ anyị dabere na ndị nnọchi anya Bahamas Flying. Mmekọrịta ndị a enyerela aka mee ka Bahamas bụrụ onye isi, dị ka onye isi nke General Aviation na Caribbean, "Thompson kwughachiri.
"Dịka ikpo okwu a na-enye anyị ohere pụrụ iche maka ito eto, ọ na-emekwa ka anyị mara na anyị ga-anụ ihe mbụ, banyere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ndị ọkwọ ụgbọ mmiri a na-enwe nke nwere ike igbochi mkpebi ha ịga leta ọmarịcha ebe anyị."
Oge zuru okirikiri - Onye nnọchi anya Bahamas na -efe efe kacha ọhụrụ, Steveo Kinevo, onye ọkwọ ụgbọ elu ama ama na onye na -ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta nke VLOG na -ebugharị ụgbọ elu Bahamas ya na YouTube nye ọtụtụ nde ndị na -ekiri, ụlọ ntu Bahamas kwụsịrị na Oshkosh. N’afọ 2018, achọpụtara Steveo mgbe ọ nọ na Oshkosh wee bụrụ onye nnọchi anya Bahamas site n’aka Maazị Thompson, onye ga -ewega ọfịs na Ọgọst 27, 2021 mgbe afọ 43 gachara na BMOTA. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri bụ: Greg Rolle, Sr. Director, Verticals and Aviation; Reginald Saunders, odeakwụkwọ na -adịgide adịgide; Steveo na Ellison “Tommy” Thompson, osote onye isi nchịkwa. Foto site n'ikike nke BMOTA
“N'ihe ngosi a, anyị chọpụtara na enyeghị ndị ọkwọ ụgbọ elu ọkwa zuru oke na mmejuputa ego nhazi nchekwa nchekwa Bahamas Airport $ 9 nke a na -ana n'ụgbọ elu nkeonwe yana onye ọ bụla bịarutere mba ụwa. Ọ bụ ezie na $ 2 mụbara ụgwọ ahụ n'oge na -adịbeghị anya ma dịrị na Bahamas ruo ọtụtụ afọ, nghọta nke ụkpụrụ ya ekwekọghị, mmejuputa iwu ya wee rụpụta ihe na -erughị otu ọnwa gara aga. N'ịga n'ihu, anyị ga -arụ ọrụ iji mezie adịghị ike ndị a wee nye ndị ọkwọ ụgbọ elu a ọkwa zuru oke, maka mgbanwe ọ bụla na -abịanụ, "Thompson kwuru.